Korea: Tsy fahampian’ny vary fahiny sy ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2008 9:42 GMT
Hita ombieny ombieny ity resaka olana ara-bary ity. Nisy hetsika mafimafy ihany natao teto Korea ho fanoherana ny fanokàfana ny tsenan’ny vary amin’ny firenena hafa. Mpikirakira aterineto iray nandray anjara tamin’ny hetsika ho famelàna ny tsena ho an’ny eto an-toerana ihany no miresaka momba ny fahiny sy ny ankehitriny.
15년전 15년전 겨울, 쌀개방 반대 선전지를 다시 읽어보며.. 
Jerena ny fanentanana nanohitra ny tsenan’ny vary tany amin’ny 15 taona lasa. Mpianatra tao amin’ny taona voalohany aho tamin’ny 1993. Nanjohy mpianatra tranainy iray izay nanontany ahy hoe : ‘Ianao koa ve tsy zanaka tantsaha?” sy nitondra ahy hanatevin-daharana hetsika iray, tokony ho iray andro amin’ny lalana vita tara ary anaty ririnina raha ny fieritreritro azy. Nefa dia nanapitra ny ririnina manontolo ilay izy. Teny an-dàlana, teny amin’ny toera-malalaka, hatrany an-tsekoly rehetra tany no nizarako taratasy vita printy ary nitazona iray aho ho tahiry hatramin’izao. Nivoaka sy niditra tamina toerana maro aho, mbola misy iray tavela ihany amin’ny kihon’ny toerana fangonam-bokatra iray.. Iza no nanoratra azy? Iza no nanonta azy? Tsy misy mahalala hoe iza no nanao azy. Voajanahary eo amin’ny olona ny tsy te-ho voasambotra. Mba ho ahy manokana no nandikako azy ity eto. Ahy manokana ireo teny ao anaty fononteny. Arovy ny varintsika!!
Tsy tokony hiharan’ny fanalalàhana ny tsena ny vokatry ny fambolena ka isan’izany ny vary!
Ny 23 janoary 1948, nivory ka nanangana ny GATT ireo firenena mandroso. Tamin'izany fotoana, fifanakalozana malalaka no notadiavin'izy ireo, saingy navahany manokana ny otrika harena voajanahary toy ny vokatry ny fambolena sy ny orinasa madinika izay manome lanja ny natiora sy ny toetoetry ny tontolo iainana. Kanefa, tamin'ny septambra 1986, ny fifanarahana iraisam-pirenena dia nanomboka nijery ny vokatry ny fambolena. Fihetsika toa vonjy tavan'andro nentina namaha ny fikorontanan'ny tsenam-vokatra avy amin'ny fambolena nitranga tany amin'ireo firenena mandroso sy tany Etazonia izany (Angamba midadasika loatra ny taniny, ka dia nihoatra noho izay nilaina ny koba, ny voamaina ary ny katsaka.)
Ho sakana amin'ny fifanakalozan-kevitry ny UR ve ny fisokafan'ny tsenan'ny vary sa tsia?
Ny governemanta sy ny mpampahalala vaovao (cho-joong-dong conservative newspapers) milaza amintsika fa noho isika tsy manokatra ny tsenan'ny vary dia tsy ho feno tanteraka ny fifanakalozan-kevitra amin'ny UR. Tsy marina izany. Teboka 15 no ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra UR ary iray ao anatin'ireo ny momba ny tsenam-bokatry ny fambolena. Ny tsenan'ny vary dia iray amin'ny tsenam-bokatry ny fambolena. Amin'ireo firenena 125 mpikambana, 10 no voakasiky ny resaka tsenam-bary. Ny sakana ho an'ny fifanakalozan-kevitry ny UR dia ny tsy fitoviam-pijery momba ny fampihenana ny tamby omena amin'ny resaka fambolena eo amin'ny Etazonia sy ny CE, sy mikasika ny resa-bola ary ny sehatra tolotr'asa. (Raha ny fitadidiako, 1-2 taona taty aoriana, ny teny hoe UR, dia nilaozana ary nosoloina ny FTA. Ny tsenan'ny voaloboka tao Frantsa sy ireo tantsaha eropeana hafa dia nanohitra azy ity tamin'ny fomba henjana mihitsy ary dia tapaka ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny Etazonia sy Eropa).
Nahoana no mandriisika mafy ny firenena hafa hanokatra ny tsenam-bariny i Etazonia?
Satria ny vidim-bary Sinoa dia antsasaky ny an'ny Amerikana eo anivon'ny tsena, ary na dia hanokatra ny tsenam-barintsika aza isika, tsy hahita tombony amin'izany i Amerika. Ndeha hodian-tsy hita izay, fa ny tena tanjony amin'ny fisisihana mafy toy io dia ny hanokatra koa vokatra 14 hafa amin'ny voka-pambolena fototra. Raha tsy mahay, ka mamela vokatra avy amin'ny fambolena hafa ankoatry ny vary isika, dia ho tratry ny vela-pandrik'izy ireo. Fanampin'izay, mikendry seha-pambolena 14 hafa ry zareo ka atombony amin'ny sehatra tena miantoka ny ain-dehibe dia ny fanokafana ny tsenam-bary. (Androany, ny vokatry ny koba (farine) ananan-tsika dia saiky avy any Etazonia avokoa, toy izany ny voamaina, ny katsaka, ny omby. Amin'ny lafiny rehetra, azontsika ahena ny fanjifana vary ary afaka hamatsy tena isika.) Ny fanafàrana vary mora vidy sy fanondranana vokatry ny orinasa lafo vidy dia manampy ny tombontsoam-pirenena. Marina hoe? –ho mora foana ve ny vidin'ny vary iraisam-pirenena?
Tany amin'ny 1979 sy 1980, raha nisedra ny hetraketraky ny voary isika, nivarotra ny variny tamin'ny 550 dollars niala avy any amin'ny 200 dollars ny mpamokatra, izany hoe nisy fiakarana 225 isan-jato izany. Tamin'ity taona ity, nisy ny hetraketraky ny natiora, ary ny tsenam-bary Amerikana tao Arkansas dia nanondrotra ny vidim-bary niala avy amin'ny 370 dollars ho 551 dollars, fiakarana 48.9 isan-jato. Tsy mbola haintsika hoe hitohy hatraiza izay fiakarany izay. Ny gony iray amin'ny akotry dia azo nanodidina ny 20,000 won teo (20 dollars) na 10,000 won (10 dollars). Natao fotsiny hamonoana ny vokatra fototra ananantsika io. Rehefa simba hatrany amin'ny fototra ny fambolentsika, tsy afaka hanampy isika fa tsy maintsy hividy amin'izay vidiny lafo apetrak'izy ireo. Tamin'ny 2000, novinavinaina ho 6.3 lavitrisa teo ny mponin'ny tany. Ho an'izany, mila tany isika 2.5 lavitrisa hektara hanaovana fambolena, nefa ankehitriny 1.5 lavitrisa hektara no ananantsika. Hiteraka olana ara-tsakafo izany. (15 taona lasa izay. Izany eo ihany, fa tamin'izany fotoana dia tsy nodinihan-tsika ny fihenan'ny velaran-tany azo velona noho ny resaka solika éthanol miaro ny tontolo iainana, ny fivadihan'ny tany fambolena ho tany hay vokatry ny fiakaran'ny maripanan'ny tany, ary ny fiakaran'ny fanjifana noho ny firoborobon'ny teo-karen'i Sina sy India. Nefa noho ny tany azo volena nihena tampoka sy ny fitombon'ny mponina dia tsy maintsy hatrehina ny olana ara-tsakafo).
Sary vilan'ny Fanondranana
Fatiantoka 10.9%, tombony 13.1%, fitambarany ankapobeny 76%.. Raka izao fahitanao ny tabilao izao (tsy misy akory tabilao miseho), tsy mampidi-bola ho antsika mihitsy ny resaka fanondranana. Raha singantsinganina dia 42-59% amin'ny sandam-pamokarana no andafosana vokatra aondrana iray. Taorian'ny 1986, vokatry ny Three Low Situation (fitotonganan'ny sandan-jana-bola iraisam-pirenena, ny vidin'ny vokatra fanodina, sy ny sandam-bola dollar), dia nisy mangirana teo amin'ny 3-4 taona teo. Nanomboka 1990 hatramin'izao (1993), dia lala-midina (mitsontsorika). Raha manondrana VTR iray amin'ny sandany 120 dollars isika, dia 1 dollar no tombony. Nefa Japana izay mpamatsy ny kojakoja rehetra sy ny fahaiza-manao dia mahita 12 dollars. Eo anatrehan'izao zava-misy izao, ny antony mbola mahavelona ny orinasa iray dia satria nahazo findramam-bola be amin'ny sandany ambany (banky ohatra?), na fanalefahan-ketra (fanampian'ny governemanta ireo orinasa), jifaina lafo 2-3 heny ny vokatra anatiny noho ny vokatra fanondrana (Hyundai Motor ohatra), ary fanararaotana tsotra izao (spéculation). Azeran'izy ireo any amin'ny mpiasa madinika sy ny tantsaha ny enta-mavesatra rehetra amin'ny fanomezana karama ambany sy fividianana ny vokatra amin'ny vidiny mora. (Raha ambara amin'ny fomba hafa, ny antony mahatonga ny banky sy ny orinasa hanan-karena dia tsy noho fahazoam-bola tamin'ny fanondranana entana fa avy amin'ny fanadanganana ny zana-bola, ny fanararaotana (spéculation), ny fanaramàna ambany, ary ny fanaovana sorona ny tantsaha … ary 4 taona taty aoriana dia niatrika ny FMI isika).
Rehefa velona ny tantsaha, velona ny olon-drehetra!! Ny sandan'ny fanafàrana vokatra avy amin'ny fambolena dia 82.9 isan-jato amin'ny fatiantoka ara-barotra.
Tsy misy fotony ny teny faneva asisika entina milaza fa ny fanondrana no hany làlan-tokana hahavelona, araka izay hitanao eto amin'ny tabilao (tsy misy tabilao miseho akory). Tsy mijery ny tombontsoa amin'ny hatsaran'ny vokatra aondrana isika, fa ny fanondranana amin'ny sandany mora loatra. Tamin'ny 1992, ny fatiantoky ny fifanakalozana ara-barotra dia 5,143,000,000 won no fitambarany ary ny sandan'ny an'ny vokatra ara-pambolena nafarana dia nitàna ny 82.9 isan-jato izay manome 4,259,000,000 won. (Betsaka ny vokatry ny fambolena nafarantsika. Miantomboka ankehitriny ny olana mikasika ny voamaina, ary , rehefa milamina izany, azontsika atao ny mandefa ny tombontsoa azo tamin'ny fanondranana any amin'ny vidin'ny voamaina)
Ny antony mahamora ny vary Amerikana
Ny antony maha lafo 4-5 heny ny vary Koreana raha oharina amin'ny vary Amerikana dia satria mora lavitra, latsaka 54 heny noho ny tantsaha Koreana no ahazoan'ny tantsaha Amerikana (na orinasa) ny tany famboleny. Ambonin'izany, mandray tambiny amin'ny fanondranana sy fahatsaran'ny vokatra ry zareo. Raha ny sandan'ny famokaram-bary eto Korea, , 46 isan-jato ho an'ny asa fanajariana ny tany. Andanin'izay, 14 isan-jato ny an'ny Amerika.
Tabilaon'ny tamby isaky ny toeram-pamokarana tamin'ny 1989.
Korea: 440,000 won (440 dollars Amerikana) CE: 3.9 million won (3,900 dollars Amerikana) Amerika: 7.47 milion won (7,470 dollars)
Eropa: Firenena 11 mpikambana (tamin'izany fotoana, tsy mbola mpikambana tao ny firenena Eropeana Tatsinanana) dia nametraka fifanarahana iombonana mikasika ny sehatry ny fambolena sy ny hetra alaina amin'ny vokatry ny fambolena afarana ho toy ny fifanakalozana anatiny ihany. Ary io vola io no nentiny indray haodina (hampiasaina) teo amin'ny sehatry ny fambolena. Ambonin'izany, 64 isan-jaton'ny teti-bolan'ny CE no ampiasaina amin'ny resaka fambolena ka 90 isan-jaton'io tetibola natao ho an'ny fambolena io indray no ampiasaina hanohana ny vidim-bokatra azo avy amin'ny fambolena. ( Efa nahatsinjo ara-potoana ny ho avy angamba ny CE ary dia nampiasa ny vola niditra ho fanohanana ny fambolena)
Na dia niakatra 10 isan-jato aza ny vidim-bary, ny vidiny ambongadiny 0.4 isan-jato ary ny antsinjarany 0.9 isan-jato.
Ny tondrozotran'ny vidiny ho an'ny mpanjifa dia manome 5.34 isan-jato tamin'ity taona ity, nefa heverina ho mbola avo lavitra aza. Ny zava-misy, raha misondrotra 10 isan-jato ny vidim-bary, misondrotra 0.4 ny ambongadiny ary 0.9 isan-jato ny antsinjarany. ( Raha marina ity, ny vidim-bary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nisondrotra avo 3 heny, ka ny vidiny (80 kg) ho an'ireo mpanjifa mahazatra dia vinavinaina ho eo amin'ny 200,000 won (200 dollars Amerikana), hiakatra ho 270,000 won izany afaka volana maromaro. Raha marina ilay fisondrotana 5.5 isan-jato nolazain'ny governemanta, dia ho 550,000 won izany afaka volana maromaro eo. Ny an'iza no mraina? Ho hitantsika eo ihany).
Nahoana no tsy maintsy arovantsika ny vary volentsika?
Satria io no vokatra tena mety amin'ny tanintsika.
Be proteina sy tsy misy cholesterol loatra.
Be kaloria indrindra.
Tena fototry ny ain'ireo toeram-pamokarana. Manome ny 44 isan-jaton'ny vola miditra avy amin'ny fambolena ary 84 isan-jato ho an'ny mpamboly mivantana.
Miaro amin'ny tondra-drano Korea dia manana teotr'andro rafetin'ny mousson. Amin'ny main-tany (lohataona), mifanesy ny oram-be ary ny tanimbary no miaty ny 2.3 billion taonina ho fiarovana amin'ny tondra-drano. Ampitahao amin'io ny tohadrano 6 izay 1.5 billion taonina no zakany.
Manadio rivotra izy. Mba hamokarana 6,660,000,000 litres, ny vary dia mitroka entona mahafaty (gaz carbonique) 6.71 tapitrisa taonina ary mamokatra entona mamelona (oxygene) 4.97 tapitrisa taonina. Ny 30 novambra 1993 (Nampitahaina tamin'ireo teo aloha, betsaka loatra ny rotsak'orana ka nitera-pahavoazana be koa. Heverintsika fa avy amin'ny fisondrotry ny hafanan'ny tany izany, Mety koa ho avy amin'ny fihenan'ny fiasana ny tany. Aorian'ny 15 taona, manontany tena aho hoe mbola hisy tanimbary azontsika volena ve)